၁၅-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၀၁-၂၀၁၇ ထိ
ဤဆုအား GCMoney(5000) ဖြင့် ကံစမ်းပါ။
&phone;: 09264686461 , 09784419691, 09961127000
Rocket Online Shopping မှ Multi-functionMeat Griller machine အား ကံထူးရှင် တစ်ယောက်အတွက် မဲဖောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Rocket Online Shopping မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။
Multi-functionMeat grinder machine (အသားကြိတ်စက်)
အသားများကို လုပ်အားမလို၊ အလွယ်တကူ ကြိတ်နိုင်ပါမယ်။ လျှပ်စစ်နဲ. အသုံးပြုရတာ ဖြစ်ပြီး ပြန်လည် ဆေးကြောရာမှာ လွယ်ကူပါတယ်။ အရေအတွက် အကန်.အသတ်သာ ရှိတာကြောင့် အခုပင် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း – ၂သောင်း ၂ထောင် ကျပ် (Delivery Free in Yangon)။ မန္တလေး၊ မြိတ်၊ မော်လမြိုင်၊ ပုသိမ်၊ ဟသာင်္တကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၄ထောင်ပေးရပါမယ်။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးပါတယ်။
လေထိုး ထိုင်ခုံ Jilong တံဆိပ် တစ်ယောက်ထိုင် လေထိုး ထိုင်ခုံကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ လေထိုးပြီး အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း – ၃၂၀၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပေါင်မုန်.မီးကင် ပေါင်မုန်.ကို အလွယ်တကူ မီးကင်စားဖို. Rocketတွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ မနက်စာအဖြစ် ပေါင်မုန်.ကို ထောပတ်နဲ. ဖြစ်စေ၊ သကြားနဲ. ဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်ပါမယ်။ အပြောင်းအလဲလေး အဖြစ် ယိုလေးနဲ.လည်း တွဲဖက် စားသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူချင်သူများကို Rocket မှ အိမ်အရောက် ပို.ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ ဈေးနှုန်း – ၁၂၀၀၀ Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများ အိမ်အရောက် ၃ထောင် တခြားမြို.များကိုတော့ ရန်ကုန် ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရေသုံး အဝတ်လျော်စက် အသေး
အခန်းကျင်းလေးထဲ အဝတ်လျော်စက် ထားချင်သူများအတွက် အဝတ်လျော်စက် အသေးကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ အသုံးပြုပုံ - အဝတ်အစားများ ထည့်ပါ။ ရေဖြည့်ပါ။ ဆပ်ပြာမှုန်. ထည့်ပါ။ ဘယ်ဘက် ခလုတ်နဲ. Timer ချိန်ပါ။ ညာဘက် ခလုတ်ကို အလယ်ထားပေးပါ။ plug ထိုးပါ။ Power On မပြုလုပ်သေးခင် ဆပ်ပြာရေထဲ စိမ်ထားနိုင်ပါသည်။ လျော်ပြီးနောက် ချိတ်ထားတဲ ရေထွက် ပိုက်ကို အောက်ချပြီး ရေထုတ်နိုင်ပါသည်။ ဆပ်ပြာ အကုန် စင်ကြယ်စေရန် သုံးခါ လျော်ပေးရပါမည်။ နောက်ဆုံး ရေညှစ်ရန် ရေညှစ် ခြင်းထည့်ပါ။ လျော်ပြီး အဝတ် ထည့်ပေးပါ။ အပေါ်မှာ ပုံးထဲပါလာတဲ့ ကော်ပြားလေး ခံပေးပါ။ ညာဘက် ခလုတ်ကို ညာဘက်လှည့်ပေးပါ။ Timer ချိန်လိုက်ပါ။ ထို.နောက် မိတ်ဆွေတို.ရဲ. အဝတ်လျော်ခြင်း ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျီ င်္ ၁၀ထည်လောက် အထိ လျော်နိုင်ပါသည်။
အိမ်တိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ မီးသတ်ဆေးဘူးအသေး နွေရောက်ပြီဆိုတော့ မီးဘေး အန္တရာယ် စိုးရိမ်လာရပါတယ်။ ရန်သူငါးပါးထဲမှာ အင်မတန် ဆိုးရွားလှတဲ့ မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်ဖို. အလွယ်တကူသုံး မီးသတ်ဆေးဘူး အသေးလေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မီးသတ်ဆေးဘူး https://www.facebook.com/thazin.phyu.7731/posts/ 1588581641469350 ဈေးနှုန်း – ၇ထောင်ကျပ် (500 ml ပါဝင်သည်) Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများကိုတော့ ပို.ခ ၃ထောင် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားမြို.များကိုတော့ ပို.ခ ၃ထောင်သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Table Mate2လိုသလို လုပ်နိုင်သော စားပွဲ ကွန်ပျူတာအတွက် စားပွဲတစ်လုံး လိုအပ်နေပါသလား။ ဆိုဖာနဲ. စားစရာတင်ဖို. မလွတ်လပ် ဖြစ်နေပါသလား။ အလွယ်တကူ ထုတ်၊သိမ်းနိုင်မယ့် စားပွဲတစ်လုံး ရှာနေပါသလား။ ခရီးသွားမယ့် ကားထက်မှာ စားပွဲသေး တစ်လုံး သယ်ဆောင်သွားချင်သလား။ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ့် Table Mate လေးပါ။ စားစရာဖြစ်စေ၊ ကွန်ပျူတာ ဖြစ်စေ၊ စာအုပ်ဖြစ်စေ၊ အလွယ်တကူ လွတ်လပ်စွာ တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုဖာပေါ် ရုပ်ရှင် ကြည့်ရင်း အလွယ်တကူ cola နဲ. စားစရာများ ယူစားနိုင်မှာပါ။ ကလေးအတွက်ဘဲ စားပွဲလိုလို၊ လူကြီးအတွက်ဘဲ စားပွဲလိုလို position အမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်မယ့် Table mate လေးကို အခုပင် ဝယ်ယူလိုက်ပါတော့။
(ကားနဲ. ပို.လိုက်စဉ် ဖိမိသောကြောင့် စားပွဲထောင့်လေး နည်းနည်း နာနေသည်။)
ဈေးနှုန်း – ၂၉၀၀၀ ကျပ် (ကော်ဖီတင်ဖို. ခွက်မပါပါ။)
ဈေျးနှုန်း – ၃၉၀၀၀ ကျပ် (ကော်ဖီခွက် ပါသည်။)
အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သုံးနိုင်တဲ့ ကပ်ခွာ Gripeez
ကားပေါ်မှာ ဖုန်းတွေတင်ဖို.၊ အဝတ်ချိတ်တွေ ချိတ်ဖို.၊ ဓာတ်ပုံတွေ တင်ဖို.၊ ကွန်ဒိုကို စိတ်ကြိုက် အလှဆင်နိုင်ဖို. Gripeez ကပ်ခွာလေး ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်သုံးနိုင်ပါမယ်။ ဈေးနှုန်း – ၁၂၀၀၀ ကျပ် (၁၀ခု ပါသည်။) မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ ၂ခုဝယ်ရင် Free ပို.ပေးပါတယ်။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Portable စောင်ခေါင်းအုန်း ခရီး ခဏခဏ ထွက်နေရသူများ၊ ပျော်ပွဲစား ခရီးသွားမယ့်သူများ၊ အလွန်အေးတဲ့ မြန်မာပြည် အပေါ်ပိုင်းကို သွားမယ့်သူများ အတွက် သယ်ဆောင် သွာနိုင်မယ့် စောင်ခေါင်းအုန်းများ ရောက်ရှိလို.လာပါတယ်။ ဂွမ်းအသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသဖြင့် အအေးဓာတ်ကို ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စောင် အဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သလို၊ ခေါက်သိမ်းပြီး ခေါင်းအုန်းအနေနဲ.လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အနံ – 3.3 ပေ အလျား – ၅ ပေ လုံလောက်တဲ့ အကျယ်အဝန်းဖြင့် သင့် တစ်ကိုယ်လုံး နွေးထွေးသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ လျော်ဖွတ်နိုင်ပြီး၊ သိမ်းဆည်းရတာလည်း လွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ. အမြဲသွားလာရတဲ့ သူများအနေနဲ. တစ်လုံးလောက်တော့ ဆောင်ထားသင့်တယ်လေ။ ဈေးနှုန်း – ၁၉၀၀၀ ကျပ်။ မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများ အားလုံး ပို.ခ ၃ထောင် ကျပ်သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်လုံးဝယ်ရင် Free ပို.ပေးပါတယ်။ ကျန်မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးပါမယ်။